संविधान कार्यान्वयन हुनेमा आशंका जन्मीए : डा. रामशरण महत - Darpanpost
» राजनीति अंक: 13059
संविधान कार्यान्वयन हुनेमा आशंका जन्मीए : डा. रामशरण महत
दाङ, माघ ३ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले वर्तमान सरकारका कारण संविधान कार्यान्वयन हुनेमा आशंका जन्मीएको वताउनु भएको छ । सरकारले हरेक क्षेत्रलाई पार्टी मुखी र कार्यकर्ता मुखी बनाउँदै लगेको भन्दै उहाँले वर्तमान सरकार संविधानमुखी नभई पार्टी मुखी बनेर चलिरहेको दाबी गर्नुभयो । नेपाल प्रेस युनियन दाङले आज घोराहीमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समृद्धिका मिठा कुरा गरेपनि काम भने हरेक क्षेत्रमा शून्य रहेको वताउनु भयो । यसर्थ वर्तमान सरकारबाट मुलुकमा कुशासन निम्तीएको समेत वताउनु भयो ।
नेपाली जनताले कांग्रेसको अपेक्षा गरिरहेको भन्दै उहाँले कांग्रेस आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापनमा भने चुकेको वताउनु भयो । नेतृत्वको कमजोर कार्यशैलीका कारण कांग्रेस माथि उठ्न नसकेको भन्दै उाँले पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन महत्वपूर्ण रहेको वताउनु भयो । एक अर्को प्रसंगमा उहाँले वाईडबडि प्रकरणमा सभापति शेरवहादुर देउवाको नाम अनाहकमा जोडिएको समेत वताउनु भयो । वाईडबड प्रकरणमा देउवाको कुनै संलग्नता नरहेको भन्दै उहाँले छानवीन भएपछि मात्रै सत्य तथ्य बाहिर आउने वताउनु भयो । नेपाल प्रेस युनियन दाङका अध्यक्ष सन्तोष सुवेदीको अध्यक्षमा भएको पत्रकार सम्मेलनको सहजिकरण सचिव आरके सितलले गर्नुभएको थियो ।